England na Scotland Euro 2021 Amụma na Tipskụ nzọ Atụmatụ - latabernasanlucar.com
England ga-ezute Scotland na Euro 2021 na June 18 2021 na 9 PM CEST na Wembley Stadium.
Na egwuregwu anyị maka egwuregwu England na Scotland na Euro 2021 anyị ga-enye gị ụfọdụ amụma, nsogbu na ịkụ nzọ maka egwuregwu a siri ike.
Ya mere, na-enweghị n’ihu ado, ka ina…
Formdị England, Usoro ntinye na usoro
England lere anya nke ọma na egwuregwu mmeghe ha na Euro 2020 megide Croatia. Ha dị mmiri mmiri ma yie ka ha nwere kemịkal dị mma. Tupu egwuregwu ha megide Kroeshia England enwetala mmeri ha niile ise na 5 na 2021, na-eche ihe mgbaru ọsọ 11 ma na-enye naanị ihe mgbaru ọsọ 1 na mmeri ha na Croatia, gara n’ihu na ụdị ahụ.
Na 2021 England si n’ụkpụrụ 3-5-2 gbanwere gaa usoro 4-3-3. Ha na-achọ ịmalite site na azụ ma kpọọ ụdị bọlbụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ.
Ndị agha na-ebuso agha agha nwere ike belata n’ọhịa ma ọ bụ dobe nke na -emepụta ohere maka oke ọgụ zuru oke na overlaps.
Harry Kane na-eme dị ka 9 ụgha nke na-adaba na miri mgbe ọ bụla iji mepụta mwakpo maka ndị egwuregwu ndị ọzọ na-awakpo wee sonyere ọgụ ahụ ngwa ngwa.
England na-egwuri egwu na ndị na-eme egwuregwu etiti abụọ na-achọghị mgbanwe dịka onye nke atọ na-ebuso ndị na-egwu egwu egwu dị ka Mason Mount. Declan Rice yiri ka ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka otu n’ime ụmụ amaala abụọ ahụ nwere nkwonkwo na-enwe ọmarịcha nchebe ma nwee ọmarịcha nchekwa dị egwu ebe onye nke ọzọ na-eche na ọ bụ Kalvin Philps bụ onye nwere ọgụ karịa ma nwee egwuregwu magburu onwe ya megide Croatia.
Osote onye isi ụgbọ mmiri Jordan Henderson nwere ike ịmalite na Kalvin Phillips ebe ma ọ bụrụ na achọrọ ike siri ike na etiti.
N’ihi na England nwere mmasị igwu egwu site na azụ Jordan Pickford na-abụkarị nhọrọ a họọrọ dị ka onye na-eche nche mgbe bọl na-eburu ndị na-agbachitere etiti dịka John Stones na Tyron Mings na-ahọrọkarị mmasị Harry Maguire.
Kyle Walker na Kieran Trippier yiri ka ha bụ ndị mbụ nhọrọ zuru oke, ọkachasị mgbe ahụmịhe dị mkpa iji chebe onwe ha mana onye isi nchịkwa Gareth Southgate nwere ike igwu egwu na-eto eto dịka Luke Shaw, Ben Chilwell ma ọ bụ Reece James ma ọ bụrụ na ọ na-egwu egwuregwu megide otu ndị na-agbasakarị nọdu ala.
England nwere ọtụtụ nhọrọ mgbe ọ na-aga n’ihu. Onu ogugu nke onu ha bu nani 23. Kane bu onye kwesiri ntukwasi obi dika ebe etiti. Southgate nwere ike ịhọrọ otu Raheem Sterling, Marcus Rashford ma ọ bụ Jack Grealish n’aka ekpe. N’aka nri ọ nwere ike ịhọrọ Jadon Sancho, Phil Foden ma ọ bụ 19 afọ Bukayo Saka.
England buru amụma ya akara
Grealish na-azụ ọzụzụ naanị na 15 nke mere ọ dị ka ọ gaghị amalite. O yikarịrị ka Scotland ọ ga-anọdụ ala wee wakpo England na tebụl ka England nwee ike izere igwu egwu na ndị egwuregwu bọọlụ 2 na-eche nche. Jordan Henderson nwere ike dochie Kalvin Phillips mana ọmarịcha arụmọrụ ya megide Croatia na-eme ka o yighị ka a ga-adaba ya.
Anyị na-atụ anya na Ben Chilwell ga-amalite n’ọnọdụ Kieran Trippier n’ihi na Trippier bụ ezigbo azụ azụ mana Kyle Walker bụ nhọrọ kachasị mma na azụ azụ. Luke shaw nwekwara ike zuru ike n’ihi mmerụ ahụ dị na aka ya.
Southgate nwere ike ịdaba Sterling iji nye ya ezumike ma Kane ga-adaba n’ihi na England na-ele anya ịwakpo ozugbo na ngwa ngwa.
Pickford, Chilwell, Ming, Nkume, Walker, Ugwu, Osikapa, Phillips, Rashford, Dominic Calvert-Lewin, Phil Foden.
Mpempe akwụkwọ Scotland, Ebu amụma na Usoro
N’okpuru onye njikwa ha Steve Clarke Scotland erutela Euro nke mbụ ha kemgbe 1996 na asọmpi mbu ha nke ụdị ọ bụla kemgbe 1998. Tupu mmeri ha n’aka Czech Republic na mbido egwuregwu Euro 2020 ha, Scotland enweghị mmeri na egwuregwu 5 ha gwuru. na 2021 ebe ha meriri 2 ma dọta egwuregwu 3.
Scotland na-agbadata n’azụ 3 na nhazi 3-5-2 nke dị ka 5-3-2 mgbe ha na-agbachitere.
N’aka ekpe-azụ, Andy Robertson bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na onye ọkpụkpọ kachasị ha mma ebe onye ọzọ na-ahụkarị azụ azụ bụ Kevin Tierney na-amalite dị ka etiti etiti aka ekpe na ọ bụ onye ọkpụkpọ kachasị mma. Tierney bụ onye na-agbachitere ọgụ ma nwee ike iji ohere Andry Robertson na-ahapụ mgbe ọ na-aga n’ihu ma nwee ike ịgbagharị n’obe ma ọ bụ belata ịbanye ọgụ.
Tierney enwetaghị egwuregwu mmeghe megide Czech Republic n’ihi mmerụ ahụ. Steve Clarke kwenyere na Tierney nwere ike ịlaghachi maka egwuregwu England na Scotland.
Ebe ndị ọzọ na-amalite n’akụkụ Tierney bụ Liam Cooper na Jack Hendry n’agbanyeghị na enwere ike ịkpọ Declan Gallagher dị afọ 30 ma ọ bụrụ na ahụmịhe karịa.
Nri mmeri nwere ike ịbụ otu Ryan Fraser ma ọ bụ James Forrest.
Midfield nwere okpukpu abụọ nke ndị na-agbachitere ndị na-agbachitere 2 na onye na-egwu egwu. Na-emekarị Scott McTominay na onye dịka Stuart Armstrong ma ọ bụ Callum McGregor ebe onye na-egwu egwu na-awakpo John McGinn ma ọ bụ David Turnbell.
Ndị abụọ na-aga n’ihu na nhazi ha na-abụkarị Che Adams na Lyndon Dykes ọ bụ ezie na Ryan Christie na Kevin Nisbet nwekwara ike ịmalite n’ọnọdụ ndị a.
Scotland Predicted Line elu
N’oge a na-ede nyocha a, Tierney ka nwere obi abụọ ọ ga-apụta na egwuregwu England na Scotland Euro 2021. Anyị na-atụ anya na akụkụ ahụ ga-anọgide na-agbanweghị agbanwe aprt site na iwebata Che Adams.
Marshall, Robertson, Cooper, Hanley, Hendry, O’Donnel, McTominay, Armstrong, McGinn, Dykes, Adams
England na Scotland Euro 2021 Amụma
Anyị na-atụ anya na Scotland ga-anọdụ ala ma bụrụ kọmpat na nchekwa. Ha ga na-achọ igbochi mwakpo na irigbu ohere ọ bụla England nwere ike ịhapụ ka ọ kwatuo ha.
N’aka nke ọzọ, England ga-achọ ịgbanwe usoro ha ka ọ bụrụ ihe doro anya na imepụta ihe na mbuso agha. A ga-ahapụ Kalvin Phillips ka ọ nwekwuo nnwere onwe ma kpọkwuo egwu dị ka igbe ọkpọ ọkpọ ọkpọ ebe Declan Rice ga-eweghara ọrụ ndị Phillips na-agbachitere ma mee dị ka onye na-ejide onwe ya.
Mason Mount ga-enwe nnwere onwe ọzọ ịgagharị ebe Rashford na Foden na Calvin-Lewin ga na-agbanwe ọnọdụ mgbe niile iji megharịa agbachitere ma kpọọ ọtụtụ mmadụ abụọ n’etiti onwe ha na igbe na ndị ọzọ na-etiti na ndị na-agba bọọlụ ga-esonyere ha. ọgụ.
Ndị na-aga n’ihu ga-aga n’ihu na-eme ihe ike nke pụtara na Declan Rice ga-akpachara anya iji gbochie ọgụ Scotland na-alụ ọgụ.
Anyị na-atụ anya na Scotland ga-emesịa nye opekata mpe ihe mgbaru ọsọ 1 na England merie 1-0.
England na Scotland Euro 2021 Nsogbu
England na Scotland Euro 2020 Nsogbu
Ndị na-ere akwụkwọ na-enye nsogbu ndị a maka egwuregwu egwuregwu England na Scotland Euro 2020:
England 1.28 ka 1.33 Dọrọ 5 ka 5.5Scotland 9.5 ka 11
Dabere na nsogbu maka egwuregwu a ọ dị ka ndị Bookmakers nwere ntụkwasị obi siri ike na England ga-emeri egwuregwu a.
Ndị na-ere akwụkwọ nwere ezigbo nsogbu maka England na Scotland na Euro 2021
Ọ bụrụ na ị na-achọ idowe egwuregwu onye mmeri ga-agba nzọ na England, anyị nwere ike ịkwado gị ịkụ nzọ na b-Bets n’ihi na ha nwere nsogbu kachasị mma maka England nke 1.34 ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ na-ere akwụkwọ na oddschecker.com
Click pịa foto dị n’okpuru ebe a iji gaa b-Bets ma jide ego egwuregwu na nkwụnye ego maka egwuregwu England na Scotland.
England na Scotland Euro Atụmatụ 2021
Dịka anyị kwuburu na ngalaba amụma amụma England na Scotland nke isiokwu a, anyị na-ebu amụma England ga-emeri 1-0. N’ihi oke nsogbu maka England, anyị anaghị adụ gị ọdụ ka ị gafere na England n’ihi na ị gaghị enweta nnukwu uru site na egwuregwu egwuregwu dị mfe.
Iji belata akụkọ dị mkpirikpi, ị kwesịrị izere ịtụkwasị ndị na-emeri egwuregwu ka ha merie otu ndị na-erughị 2.0.
N’ikwu nke a dị ka nkwarụ nkwarụ, oke / n’okpuru nhọrọ ịkụ nzọ nwere ike bụrụ uru bara uru ọ bụghị naanị maka egwuregwu Euro 2020 a n’etiti England na Scotland kamakwa ọtụtụ egwuregwu bọọlụ n’oge Euro na ọkacha mmasị na okpuru.
Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ anyị nwere maka ịkụ nzọ bara uru ị nwere ike ịme maka England na Scotland na Euro 2021:
N’okpuru ebumnuche 2,5, NG Nsogbu 2.5. NG nọchiri anya otu n’ime otu abụọ ka ọ ghara inye akara. N’okpuru akara 2.5, England iji merie. Nsogbu 2.95.Handicap nzọ na 1: 0 ọghọm ka England na a Olee (x). Nsogbu 3.45England iji merie na Calvert-Lewin iji nweta akara. Nsogbu 2.60England iji merie na Rashford iji nye goolu. Nsogbu 3.25 Rashford iji akara ya na England merie 1: 0. Nsogbu 30.0 Calvert-Lewin iji merie ya na England merie 1: 0. Nsogbu 24.0